ashlesha thakuri – Fursad Nepal
Tag Archives: ashlesha thakuri
‘प्रेमगीत २’ कस्तो ? अश्लेषा भन्छिन् यस्तो
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on ‘प्रेमगीत २’ कस्तो ? अश्लेषा भन्छिन् यस्तो
वर्षको प्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत २’ यही शुक्रवारबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । वर्ष २०७२ मा प्रदर्शनमा आएको ‘प्रेमगीत’को सिक्वेल ‘प्रेमगीत २’ को अहिले गीतसंगीत र ट्रेलरको उतिक्कै चर्चा छ । अझ ‘प्रेमगीत’मा ‘प्रेम’को भूमिका निर्वाहा गरेका नायक प्रदीप खड्का झण्डै २ वर्षपछि पर्दामा फर्किएका कारण पनि यो फिल्म अहिले प्रतिक्षित बनेको छ । ‘प्रेमगीत’ मा नायिका पूजा शर्मासँग रोमान्स गरेका नायक …